November 24, 2019 - Myitter
November 24, 2019 Myitter 0
(မိမိ၏သားသမီးများကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါဗျာ) 24-11-2019 ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ မန်သဲအုပ်စု၊ ကုန်းကြီးရွာမှ ဦးထွန်းဝေ + ဒေါ်လှသန်းရီ တို့၏သမီး မကြယ်ဇင်မိုး(၆)နှစ်သည် (18-11-2019)ရက်နေ့ ညနေအချိန်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ (ဆော့ကစားနေရာမှ အိမ်ပြန်ရောက်မလာ၊ ည(၇)နာရီခန့်ရောက်မှ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရှိကြ) ပျောက်ဆုံးနေသူ မကြယ်ဇင်မိုး(၆)နှစ် ရုပ်အလောင်း(အဝတ်အစား မပါ၊ ပါးစပ်ကို အဝတ်စည်းထား)ကို ယနေ့ […]
Kara အဖွဲ့ဝင် ဂိုဟာရာ ကို နေအိမ်အတွင်း သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိ
နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉။ တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအဆိုတော် အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Kara ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် ဂိုဟာရာ ( Goo Hara ) ကို သူမရဲ့ နေအိမ်အတွင်းမှာ သေဆုံးလျက်သားနဲ့ တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂန်နမ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသိတစ်ယောက်က ဂိုဟာရာ […]
အသကျ ၁၀၀ ရှိပမေဲ့ ရှာလယျလမျးမကွီးကို တဈယောကျတညျး ခြုံမွကျရှငျးပေးခဲ့တဲ့အဘှား စိတျစတေနာကောငျးဆိုတာ အသကျငယျသညျ ကွီးသညျမဟူ လူတိုငျးမှာ ထားနိုငျတဲ့ ရှိနိုငျတဲ့ လေးစားဖှယျခဈြခငျဖှယျ စိတျလေးပါပဲ..ဒီလိုပဲ ပရဟိတအလုပျဆိုတာလညျး ငယျသညျ ကွီးသညျမဟူ လူတိုငျးမိမိတတျနိုငျသလောကျ လုပျနိုငျတဲ့အလုပျပါ…. အဲဒီလို အမြားအကြိုးအတှကျ ငယျသညျကွီးသညျမဟူ လူတိုငျးလုပျနိုငျပါတယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို သကျသပွေခဲ့တာကတော့ အသကျ […]
ဖိလစ်ပိုင်ရောက်ရောက်ချင်း အဆင်မပြေမူတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနဲ့ အရှေ့တီမော ယူ၂၂ အသင်း
ဖိလဈပိုငျရောကျရောကျခငျြး အဆငျမပွမေူတှနေဲ့ ကွုံခဲ့ရတဲ့ မွနျမာနဲ့ အရှတေီ့မော ယူ၂၂ အသငျး မွနျမာယူ၂၂အသငျးဟာ ဒီနမေ့နကျ၉နာရီခှဲက ရနျကုနျ လဆေိပျကနထှေကျခှာသှားခဲ့ပါတယျ။ဖိလဈပိုငျ နိုငျငံ မနီလာလဆေိပျကို နလေ့ညျခငျးမှာ ရောကျရှိခဲ့ပမေယျ့ ဟိုတယျသှားဖို့ ဘကျဈကား အရနျသငျ့ရှိမနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဘကျဈကားကို အခြိနျကွာမွငျ့စှာစောငျ့ဆိုငျးခဲ့ရပွီး ရောကျလာတဲ့ အခြိနျမှာလညျး မီနီဘကျဈ အဆငျ့လောကျတောငျ မရှိတာကွောငျ့ […]
ကျားပါးစပ်ပိုက်နှင့်ကျားဖောင်လုပ်ငန်း ပင်လယ်ဝ မြစ်ဝအတွင်း ရေအကျဆုံးသောအချိန်တွင် ထိပ်ဝ ၆ လက်မ၊ အမြင့် ၁၁ တောင်ခန့်ရှိသည့်တိုင် ၂ တိုင်ကို တစ်တိုင်နှင့် တစ်တိုင်(၁၈)တောင်အကွာ အောက်ခံမြေ၌ ခိုင်ခံ့စွာ စိုက်ထူထားရသည်။ ယင်းတိုင် ၂ တိုင်တွင် ပိုက်တန်းကို ချည်ထားပြီး ၄ တောင် ၅ […]
ထမင်းမစားဘဲ ရသမျှ ပိုက်ဆံ ကို မိတ်ကပ်ဖိုး အတွက် စုနေလို့ မကြာခင်သေရေတာ့မယ့် မိန်းကေလး….
ထမငျးမစားဘဲ ရသမြှ ပိုကျဆံကို မိတျကပျဖိုး အတှကျ စုနလေို့ မကွာခငျသရေတော့မယျ့ မိနျးကလေး လူတှအေားလုံးဟာ ရူးသှပျကွတယျလို့ ဆိုရငျ ပရိတျသတျကွီး လကျခံနိုငျပါ့မလား ………..? လကျမခံနိုငျလောကျတဲ့ ဆိုရိုးစကားတဈခုပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး တကယျ့လကျတှမှေ့ာတော့ တကယျကိုပဲ ရူးသှပျခဲ့ကွပါတယျ။ လူတှဟော လိုခငျြတာ၊ ဖွဈခငျြတာ တဈခုခုအတှကျ အသကျတောငျပေးပွီး […]
MMID Top 8 result showမှာ အေးမြဖြူ botton3မှာကိုထိုင်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်း…. ရေးထားတာလေးတွေ တော်တေ်ာမိုက်တယ်…
ညီတော်မောင် တစ်ပါးရဲ့ပို့စ် ကြိုက်လို့မလာတာ နှလုံးသားကို ကိုင်ညှစ်ရင်ဘာထွက်မလဲ❓❔❓ ဆရာဝန်က…သွေးထွက်မယ်လို့ဖြေမယ်။ ကဗျာဆရာက…မျက်ရည်ထွက်မယ်လို့ဖြေမယ်။ စီးပွားရေးသမားက…. ငွေထွက်မယ်လို့ဖြေမယ်။။ Vision မတူတော့ အဖြေမတူပါဘူး။ ဒီနေ့ည MMID Top 8 result showမှာ အေးမြဖြူ botton3မှာကိုထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အေးမြဖြူကိုထိုင်စေလိုက်ခြင်းဟာသူ့ကိုချစ်တဲ့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို […]
(၈)နှစ်သမီးလေးကို လူမဆန်စွာမုဒိန်းကျင့် ဆာလာအိတ်ထဲထည့် ပြီးအလောင်းပစ်ခဲ့သည့် လူသတ်မုဒိန်း (၂)ကောင် ဖမ်းမိပြီး
(၈)နှစ်သမီးလေးကို လူမဆန်စွာမုဒိန်းကျင့် ဆာလာအိတ်ထဲထည့် ပြီးအလောင်းပစ်ခဲ့သည့် လူသတ်မုဒိန်း (၂)ကောင် ဖမ်းမိပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ (၂)ဦးကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ အမှုမှာ ၂၁.၈.၂၀၁၉ ရက်နေ့(၀၇၃၀)အချိန် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ သိမ်ဖြူမီးရထားရပ်ကွက်၊ သိမ်ဖြူ ခုံးတံတားအောက်၊ ရထားသံလမ်းဘေးတွင် ကလေးအလောင်း တစ်လောင်းအား မြွေရေခွံအိတ်ဖြင့်ထည့်လျက် […]
ရှမ်းပြည်နယ်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်နိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ပန်လင်းဆိုင်ဒေသမှာ တည်ရှိပြီး ဉာဏ်တော် အမြင့်ပေ ၄၃ ပေ၊ တင်ပလ္လင်ခွေ အကျယ် ၃၆ ပေ ကျယ် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ဒီ နှီးဘုရားကြီးကို မိုင်းဖုန်း […]
ဝမျးသာစရာ သတငျးကောငျးပါ ပြောကျနတေဲ့ သမီးလေး မခယျြရီအောငျ အား တှရှေိ့ပါပြီ….
ဝမျးသာစရာ သတငျးကောငျးပါ ပြောကျနတေဲ့ သမီးလေး မခယျြရီအောငျ အား တှရှေိ့ ပြောကျနတေဲ့ သမီးလေး မခယျြရီအောငျ အား တှရှေိ့ ထိမျးသိမျးထားသူမြားနှငျ့ ခြိတျဆကျပွီး AlinnMyay(အလငျးမွေ) မီဒီယာ မှ ကူညီကာ အုပျထိနျးသူ မိဘမြားထံသို့ ပွနျလညျအပျနှံပေးနိုငျရေး အတှကျ သှားရောကျ ချေါဆောငျနပေါပွီ…။ ကူညီပွီး […]